AKHO amaRadio kwi-737 ezininzi pak ye-Prepar3dv4
umbuzo AKHO amaRadio kwi-737 ezininzi pak ye-Prepar3dv4
iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo - iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo #733 by spilok
Kwi-737 pak ye-prepar3dv4, yonke into isebenza kakuhle ngaphandle kokuchofoza kwi-icon yomsakazo. Nje umxube omkhulu omnyama. Naliphi na indlela yokufumana ii-radios ukuba zibonise?
Ps. Oku kwenzeka nakwi-Boeing 717 pak
Uhlobo lokugqibela: 1 unyaka we-5 inyanga edlulileyo spilok.
iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo #734 by Dariussssss
Ngaba uya kucela ukuba uthumele apha kwi-Forum yeP3D apha?
Lo u malunga neFSX kunye neFSX Steam.
iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo #736 by rikoooo
Ndiye ndahambisa isihloko kwiforamu elungileyo.
Ukuba i-icon yomsakazo ayisebenziyo unako ukufikelela kuyo kwimenyu yebar yexhobo.
iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo #738 by spilok
Hayi ... awukwazi ukufikelela kwirediyo apho. Kuya kuphakama emnyama.
Ndenze uphando oluthile, kwaye ekubeni ezi ziBhoeings ezivela kwi-FSX kwaye zichitshiyelwe ku-P3d, kubonakala ngathi ngandlela-thile ndatshitshisa i-GAUGE okanye into ethile kwii-radios kwi-Boeings. Ingaba yifayile yeCAB, awazi.
Ndiyathemba, umntu unokuncedisa ngokubuyisela lo mgangatho. Ndiyakuthanda kakhulu iifayile zeBoing ku-Rickoooo kwaye ngokuqinisekileyo ndathanda ukuzisebenzisa kwi-Prepar3dv4.
iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo - iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo #739 by rikoooo
Emva koko, le sixhobo yamatshini kukuba kuwe: Iimpawu zeGauges I-Recover Tool http://www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/73/256
Ndixelele ukuba kunceda
iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo #740 by spilok
Enkosi. Ndizamile oko kwilayibhrari ye-AVSIM. Ndalanda ikhonkco yakho kwaye ndazama kwakhona, kodwa AKUBA UHLULE. Isalathisi esikhulu esimnyama esingenazo iiradiyo kwiyiphi na yangaphambili i-FSX Boeing.
Ndiyazibuza ukuba kwakhona ukubiza igama lokulungiselela kunye nokuvumela ukuba lakhiwe kwakhona lenze ntoni na? Ndicinga ukuba ukhuselekile ukwenza njengoko ndenze kuFSX?
iinyanga 1 kunyaka 4 eyadlulayo #767 by spilok
Konke kulungile, ngoku. Ukufakela kwakhona kucwecwe yonke into.
Ixesha ukwenza page: 0.161 imizuzwana